के तपाईं स्वैप विभाजनको आवश्यकता छ?
लिनक्स सुझावहरू र ट्रिक्सहरू
एउटा प्रश्न जुन लिनक्स स्थापना गर्दा सामान्यतया सोधिएको छ "के मलाई स्वैप विभाजन चाहिन्छ?"।
यस लेखमा म व्याप विभाजन को लागी प्रयोग को बारे मा समझाने जा रहयो हूँ र तब म तपाईंलाई निर्णय गर्न को लागी जा रहयो हूँ कि तपाईंलाई आवश्यकता हो या नहीं।
मेमोरी एक खरीददारी केन्द्र कार पार्क जस्तै थोडा छ। दिनको सुरुवातमा कार पार्क खाली हुनेछ र त्यहाँ धेरै स्थानहरू उपलब्ध हुनेछन्। जब मानिसहरू आउन थालेका छन् र अधिक स्थानहरू प्रयोग गरिन्छ र अन्तमा कार पार्क पूर्ण हुनेछ।
यस बिन्दुमा हुन सक्ने केहि चीजहरू छन्। तपाईँ वा अन्य कारहरू कार पार्कमा प्रवेश गर्न रोक्न सक्नुहुनेछ जब सम्म खाली स्थानहरू उपलब्ध हुँदैन वा तपाईले केहि कारहरू बलियो गर्नका लागि यसका लागि खाली ठाउँहरू जारी गर्न सक्नुहुन्छ।
कम्प्युटिङ् सर्तहरूमा तपाइँ पहिला तपाईको कम्प्युटर प्रयोग गर्न सुरु गर्दा तपाइँसँग तपाइँको धेरै मेमोरी उपलब्ध हुनु पर्दछ। एक मात्र मेमोरी प्रयोग गरिने छ जुन अपरेटिङ सिस्टमको आवश्यकता पर्दछ। प्रत्येक पटक तपाईंले एउटा अनुप्रयोग लोड गर्नुहुने नयाँ प्रक्रिया सुरू हुनेछ र अनुप्रयोगको लागि एक सेट मेमोरीलाई अलग गरिनेछ।
प्रत्येक पल्ट जब तपाईंले नयाँ अनुप्रयोग लोड गर्नुहुन्छ त्यस मेमोरी चलाउन उपलब्ध हुनेछ र अन्ततः तपाइँ यो बिन्दुमा पुग्नुहुनेछ जुन त्यो अनुप्रयोग चलाउन पर्याप्त बायाँ छैन।
जब पर्याप्त मेमोरी बाँकी छैन तब लिनक्सले के गर्छ?
यसले बन्द गर्ने प्रक्रियाहरू सुरू गर्दछ। यो केहि चीज छैन जुन तपाई साँच्चै हुन चाहानुहुन्छ। जब त्यहाँ छनौट गर्न को लागी एक प्रक्रिया को लागी एक स्कोरिंग तंत्र हो तपाई मूलतया तपाइँको अपरेटिङ सिस्टममा निर्णय छोडेर यसलाई आफ्नो हातबाट बाहिर निकाल्दै हुनुहुन्छ।
Linux ले वर्चुअल मेमोरी चल्दा प्रक्रियाहरू बन्द गर्न मात्र शुरू गर्नेछ। भर्चुअल मेमोरी के हो? भर्चुअल मेमोरीको भौतिक RAM + प्याज उद्देश्य (स्वैप) को लागि कुनै पनि डिस्क स्पेस सेट गरिएको छ।
ओवरफ्लो कार पार्कको रूपमा स्वैप विभाजनको बारे सोच्नुहोस्। जब सबै कार पार्किंग रिक्त स्थानहरू भरिएका छन् ओभरफ्लो कार पार्क अतिरिक्त ठाउँको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक ओभरफ्लो कार पार्क को उपयोग गर्न को लागी एक तरफ छ। सामान्यतया ओभरफ्लो कार पार्क वास्तविक सपिङ्ग सेन्टरबाट टाढा छ र यसैले चालकहरू र यात्रुहरू पसिना पसलहरूमा थप हिड्न पर्छ।
तपाईंले स्वैप विभाजन सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ जुन लिनक्स द्वारा प्रयोग गरी निष्क्रिय राम भण्डारण गर्न भण्डारण गर्न प्रयोग गरिने छ। स्वैप विभाजन मूलतया तपाईँको हार्ड ड्राइवमा विभाजित डिस्क स्पेस हो। (अधिक ओभरफ्लो कार पार्क जस्तै)।
यो तपाईंको हार्ड ड्राइभमा भण्डार गरिएको फाइलहरू भन्दा राम्ररी राम्रा पहुँच राम्ररी छ। यदि तपाइँ पत्ता लगाउनुहुन्छ कि तपाई निरन्तर स्मृतिबाट बाहिर निस्कनु भएको छ र तपाईको हार्ड ड्राइभ व्हियरिंग हो जुन सम्भवतः तपाईं स्वैप स्पेस प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्भव छ।
तपाइँलाई बदलिदो स्वैप विभाजन चाहिन्छ?
यदि तपाइँसँग पहिलो स्थानमा सानो स्टोरेज भएको कम्प्यूटर छ भने यो अत्यधिक सिफारिस गरिएको छ।
परीक्षणको रूपमा मैले 1 गीगाबाइट रामसँग एक भर्चुअल मेमोरी सेट अप गर्दछु र विभाजन स्वैप गर्दैन। मैले Peppermint लिनक्स स्थापित गरे जुन LXDE डेस्कटप प्रयोग गर्दछ र यसको समग्रमा कम मेमोरी पदचिन्ह छ।
Peppermint लिनक्स प्रयोग गर्नुभएका कारण यो हो कि यो क्रोमियम पूर्व स्थापित भएको छ र तपाईंले क्रोमियम ट्याब खोल्ने हरेक पटक मेमोरीको सभ्य राशि प्रयोग गरिन्छ।
मैले ट्याब खोलिदिएँ र linux.about.com लाई नेविगेट गरियो। त्यसपछि मैले दोस्रो ट्याब खोल्यो र त्यसै गरे। मैले यो प्रक्रिया दोहोर्याएपछि अन्ततः मेमोरी भाग्यो। माथिको चित्रले देखाउँछ के भयो। क्रोमियमले आधारभूत सन्देशलाई प्रदर्शित गर्दछ जुन ट्याबले काम रोक्न सक्छ र सम्भवतः स्मृतिको कमीको कारण हो।
त्यसपछि मैले 1 गीगाबाइट राम र 8 गिगाबाइट स्वैप विभाजनको साथ एक नयाँ भर्चुअल मेसिन सेट अप गरें। ट्याब पछि ट्याब पछि मैले ट्याब खोल्न सक्षम भए र यद्यपि शारीरिक राम कम थियो भने स्वैप स्पेस प्रयोग गर्न सुरु भयो र म ट्याबहरू खोल्न जारी राख्न सकिन।
यदि तपाइँसँग 1 गीगाबाइट रामको साथमा एक मेशिन छ भने तपाइँसँग स्वैप विभाजनको आवश्यक छ भन्दा बढी छ भने यदि तपाईसँग 16 गीगाबाइटको राम छ। यो धेरै सम्भव छ कि तपाईं कुनै ग्याँस नम्बर क्रन्चिंग वा भिडियो सम्पादन नभएसम्म कुनै पनि मेगावाटमा स्वैप स्पेसको 8 जीबीगाइट्सको साथ प्रयोग गर्नुहुने छैन।
म सधैं स्वैप विभाजन गर्न सिफारिस गर्न चाहन्छु। डिस्क स्पेस सस्तो छ। जब तपाईं कम मेमोरीमा दौडिरहनु भएको छ भने एक ओभरड्राफ्टको रूपमा यो केहि सेट गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले पत्ता लगाउनुभयो कि तपाईको कम्प्यूटर सधैँ मेमोरीमा कम छ र तपाईले स्वैप स्पेस प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ यो तपाइँको कम्प्यूटरमा मेमोरी अपग्रेड गर्न सोच्न समय हुन सक्छ।
यदि तपाईंले पहिले नै लिनक्स स्थापना गर्नुभयो र तपाईंले स्वैप विभाजन सेट गर्नुभएको छैन भने सबै हराएको छैन। स्वैप फाइल सिर्जना गर्न यसको सम्भव छ जुन मूलतया उही लक्ष्य प्राप्त गर्दछ।
के म स्वैप स्पेसको लागि मेरो एसएसडीमा ठाउँ छुटाउन सक्छु?
तपाईं स्वैप स्पेसको लागि SSD मा एक ठाउँ खाली गर्न सक्नुहुन्छ र सिद्धान्तमा यो एक पारंपरिक हार्ड ड्राइभ भन्दा विभाजनमा पहुँच गर्न छिटो हुनेछ। SSD सँग सीमित जीवन अवधि छ र केवल एक निश्चित संख्या पढ्न र लेख्न सक्दछ। चीजहरू राख्ने सन्दर्भमा राख्नुहोस् कि नम्बर वास्तवमा धेरै उच्च छ र तपाइँको एसएसडी तपाइँको कम्प्यूटरको जीवनलाई टाढा पार्नेछ।
स्वैप स्पेस एक ओवरफ्लो बफर हुनु पर्छ र लगातार प्रयोग गर्दैन। पहिले नै उल्लेख गरिएमा यदि तपाईले स्वैप विभाजन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने मेमोरी अपग्रेड गर्न विचार गर्नुहुन्छ।
के तपाईं गृह विभाजनको आवश्यकता पर्दछ?
लिनक्स प्रयोग गरेर वाइफाइ पासवर्डहरू पुनःप्राप्त गर्ने
कसरी विन्डोज पहिले उबन्टु बूट प्राप्त गर्ने
कसरी प्रयोगकर्ताहरूलाई बलियो बनाउन उनीहरूको पासवर्डहरू परिवर्तन गर्न
Banshee अडियो प्लेयरको लागि एक गाइड
6 Ubuntu अनुप्रयोग खोल्ने तरिका
लिनक्सको लागि उत्तम सङ्कुचन उपकरण कुन हो?
कसरी ईफिओ बूट प्रबन्धक प्रयोग गरेर Windows बाट Ubuntu बूट प्राप्त गर्ने
फेडोरा गनोम कीबोर्ड शर्टकट
ITunes रेडियो प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
तपाईंको आईप्याडमा विज्ञापनहरू कसरी ब्लक गर्ने?
Dreamweaver मा वेब फोटो एल्बम बनाउनुहोस्
Adobe अनुभव डिजाइन सीसीमा सामाग्री सामाग्री कार्ड कसरी बनाउने?
कार एयर Purifiers र आयनकर्स को हूड अन्तर्गत
के अध्यक्ष केबल्सले महत्त्वपूर्ण फरक पार्छ? विज्ञानमा आउछ!
फेसबुकमा साथीहरूलाई लुकाउने को लागी लुकाउनुहोस् पोस्टहरू देखाउनुहोस् तपाइँ मन पराउनुहुन्न
के तपाईं नि: शुल्कका लागि ट्विच प्राइम गर्न सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ?
लिनक्स आदेश सिक्नुहोस् - कस
कसरी आईट्युन्समा एल्बम आर्ट छुटेको ढाँचा प्रयोग गरी छुटेको छ
कसरी त्रुटिहरूको लागि MP3 फाइलहरू जाँच गर्नुहोस्
स्रोत - लिनक्स / युनिक्स कमान
LIST फाईल के हो?
साप्ताहिक सुरक्षा स्क्यानको साथ तपाईको पीसी नि: शुल्क मालवेयर राख्नुहोस्
पाठ हाइलाइट गर्नुहोस् - आउटलुकमा मार्कर पेन पृष्ठभूमि रंग
याहूको लागि पहुँच कुञ्जी कसरी सक्षम पार्नुहोस्! मेल
HDCP त्रुटि: के यो छ र कसरी समाधान गर्ने
बाश-लिपिमा IF-Statements कसरी लेख्नुहोस्
Google कार्य के हो?
सबै चीज तपाईलाई फेसटाइमको बारेमा थाहा छ
एक्सेल मेडियन आईएफ एरे सूत्र
एप्पल तपाईको कारको साथ कसरी प्रयोग गर्ने